पैसा नहुँदा उपचार नगरी फकीईन् रती, घरमै मर्ने ईच्छा – Enayanepal.com
पैसा नहुँदा उपचार नगरी फकीईन् रती, घरमै मर्ने ईच्छा
मिठो मसिनो खाने अनि राम्रो लगाउँने कसलाई पो माया हुँदैन र ? मिठो खाएर आप्नो दैतरी अनि समाजमा केही गरेर देखाउन सवैकौ ईच्छा हुन्छ तर आर्थिक अभावका कारण जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका एक जोडी १२ वर्ष देखी मृत्यू संग लडिरहेको छ ।
यहाँको सवै भन्दा दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने रोकायगाउँ गाविस वडा नं ७ का नरेन्द्र गिरीकी २९ वर्षीय श्रीमती रती गिरी विगत १२ वर्ष देखी रोग संग लडिरहेकी हुनुहुन्छ । यो परिवार संग उपचार गर्नका लागी रकम नहँुदा भारतवाट घर फर्केको छ ।
३ छोराछोरीका अभिवावक वनेका गिरी परिवार यो भन्दा अगाडी स्थानिय स्वास्थ्य संस्थामा धेरै पटक उपचार गरेको वताउँछन् । पहिले पहिले कमै छाती दुख्थ्यो स्थानिय स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार टिवीको औषधी ९ महिना सम्म सेवन गरेकी रत्ती सन्चो नभए पछि वाध्य भएर छोराछोरी च्यापेर ५ महिना अघि भारत गएका थिए ।
भारतमा कमाई गदै उपचार गरौला भनेर श्रीमती ,छोराछोरी लिएर गएका नरेन्द्रले दुई महिना अघि भारतको सिम्ला हस्पीटलमा श्रीमतीको एक्सरे गराएपछि फोक्सोमा समस्य रहेको वताएपछि उपचार गर्ने पैसा नभएर नेपाली दाजुभाईले सहयोग मागेर गाडी भाडा हालेर घरमै मर्ने भनी रोकायगाउँ फर्केका छन् ।
१२ वर्ष पहिले सामान्य छाती दुख्ने गरेको थियो रतीले भन्नुभयो । स्थानीय लिम्सा स्वास्थ्यमा निशुल्क पाईने औषधी लिएर खाएकी रत्ती रोग वल्झिदै जाँदा देवी,देवता देखी स्थानीय जडीवुटी सवै गरेर केही नलागेपछि अन्तिममा अवस्थामा भारत गएको गिरी परिवार वताउँछ । भारतमा काम गरेर जम्म भएको पैसाले एक्सरे गरेपछि फोक्सोमा समस्य छ भन्ने थाह पाएपछि थप रकम नहुँदा घर आएको रतीले रुदै भन्नुभयो ।
लाखै रकम चाहिदो रहेछ फोक्सोको उपचार गर्न हामी संग गाडी भाडा सम्म नभएका मानिसले कसरी उपचार गर्नु ? अन्तिम अवस्थामा सास भएपनि घर पुग्ने ईच्छा अनुसार घर आएको रत्तीका श्रीमान् नरेन्द्रले रुदै वताउनुभयो । एक कक्षा पनि नपढेका गिरी परिवार सामान्य रुपैया मात्र चिन्ने गर्दछ । घरको आर्थिक अवस्था पनि निकै दयनिय रहेको छ ।
आधा रोपनी भिरालो जग्गा मात्र सम्पती नाममा रहेको गिरी परिवार वस्ने घर नभएर छाप्रोमा वस्दै आएको स्थानीय राजेश पुनले वताउनुभयो । जाजरकोट सदरमुकामवाट रोकायगाउँ ३ दिनको पैतल हिडेपछि मात्र पुगिन्छ । अहिले एक पाईलो सम्म हिड्न नसक्ने अवस्थामा रती पुगेकी छन् ।
घरमा खानाको लागी एक गेडा अन्न छैन । तीन साना वच्चा वच्ची छन् । उनीहरुको लालनपालन कसरी गर्ने अर्को समस्य छ । जहाँ होचो त्यसैमा घोच्यो भनेझै गरिव माथी झन पिडा हुँदा मृत्यूलाई अंगाल्नु वाहेक अरु विकल्प नभएको गिरी वताउँछन् ।